फेरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार, यी हुन् कांग्रेस र माओवादी मन्त्री बनेका ५ जना — Imandarmedia.com
फेरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार, यी हुन् कांग्रेस र माओवादी मन्त्री बनेका ५ जना
पोखरा ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । २९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले डेढ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
थप ६ जना मन्त्रीहरुलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले सपथ गराएकी छिन् । कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कुमार खड्का भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्री र मेषलाल श्रेष्ठले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सामाजिक विकासमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। यस्तै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा मणिभद्र शर्माले शपथ लिएका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट रामजी बरालले अर्थ, दीपक चर्ती मगरले वन, वातावरण तथा भू-संक्षण र चन्द्रबहादुर बुढाले भूमि व्‍यव्स्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । यस्तै आफूहरुसँग भएको सहमति उलंघन भएको भन्दै जनता समाजवादीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा हाल सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री हरिशरण आचार्य छन् । तर मन्त्री चयनलाई लिएर कांग्रेसमा विवाद देखिएको छ । तनहुँका दोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा आएर काटिएको छ भने विन्दुकुमारको थपिएको थियो ।
बिहीबार कांग्रेसको बैठकमा समेत विश्वकर्माको नाम अन्तिम ५ मा राखेर छलफल चलेको थियो । पार्टीभित्र रामचन्द्र निकट मानिने विश्वकर्मालाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र प्रवक्ता कुमार खड्काले मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । शुक्रबार मुख्यमन्त्री सचिवालयले विश्वकर्मालाई मन्त्रीको सपथ लिने जानकारी गरायो ।
उनले बधाई पनि पाए । तर मन्त्रीको सपथ लिन पाएनन् । विन्दुकुमार थापा मन्त्री बनेका छन् । निष्ठाको राजनीतिमा अपराध भएको सांसद विश्वकर्माको प्रतिक्रिया छ । ‘नाम काटियो भन्ने सुनें । यो त पार्टीभित्र अपराध भयो,’ उनले भने, ‘४२ वर्षदेखि निष्ठाको राजनीति गरिरहेको छु । अहिले अपमान गरियो । योभन्दा अरु मैले के भन्न सक्छु र ?’
आफू यसबारे धेरै बोल्न नचाहेको भन्दै सांसद विश्वकर्माले भने, ‘पार्टीभित्र समावेशिताको एउटा सिद्धान्त छ । तर त्यही सिद्धान्त पनि अपमान गरियो । अरु कुरा बोलिनँ ।’ विश्वकर्मालाई पाखा लगाउँदै मन्त्री भएका थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् ।
देउवा पक्षधर उनी व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा पहिले मन्त्री हुने आकांक्षीमा कास्कीका विन्दुकुमार थापाको चर्चा चलेको थियो । नियुक्त भएकै दिन जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले चार जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे ।
उक्त दिनसमेत थापाको मन्त्रीमा नियुक्त हुने चर्चा चलेको थियो । तर कांग्रेस कोटाबाट बिनाविभागीयमा नियुक्त हुँदै कुमार खड्का नियुक्त भए र सरकारको प्रवक्ता समेत तोकिए । देउवा निकटका थापा मन्त्रीका लागि लबिङ गर्दै पटक–पटक काठमाडौं समेत धाएका थिए ।
यता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार विहान आफ्नो निजी निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफलमा देउवाले भदौ १६ मा कुनै हालतमा महाधिवेशन हुने गरी काम थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सभापतिज्यूले भदौ १६ गतेको मिति कुनै हालतमा पछाडि नसर्ने गरी, भदौ १६ गते महाधिवेशन उद्घाटन गरी सम्पन्न गर्ने गरी कुन कुन तहको कसरी के हेरफेर गर्दा हुन्छ तपाईंहरु सबैले मिलेर गर्न गराउनु भन्नुभयो ।’
तल्लो तहका पार्टी कमिटीको अधिवेशनको मिति सार्ने काँग्रेसको तयारी छ । क्रियाशील सदस्यता विवादको निकास तथा अन्य आन्तरिक तयारी पूरा हुन नसकेपछि वडा, नगर र क्षेत्र अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न लागिएको देखिन्छ ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद समयमा नटुंगिँदै पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको मूल कार्यतालिकामा असर नगर्ने गरी स्थानीय तहका अधिवेशनको मिति केही पर सारिने छ । काँग्रेसले साउन १२ गतेबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा स्तरको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
यसका साथै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिवेशन साउन १६ गते गर्ने निर्णय यसअघि गरिएको थियो । उक्त कार्यकालका करिब प्रभावित हुने पुगेको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवरण गाउँ तहसम्म पुर्याउनुपर्ने, पार्टीको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने लगायतका कारण पनि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा अधिवेशन गर्न सम्भव छैन।
आजको बैठकमा बल्ल क्रियाशील छानविन समिति संयोजक रमेश लेखक र निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । भोलिसम्म क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन देउवालाई बुझाउने देउवाको तयारी छ । आजको बैठकले स्थानीय तहको कार्यतालिका संशोधनबारे निर्णय लिन नसकेपछि भोलि ९ बजे फेरि बैठक बस्ने छ ।
आज प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा सम्बोधन गर्ने भएकाले बैठक भोलि बस्ने गरी सकिएको थियो । सानेपामा जारी धर्ना र अनशनको सम्बोधन गर्न निर्देशन देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना र अनशन गरिरहकोहरुको माग आजै सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
देउवाले अनशनकारीहरुसँग वार्ता गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र पूर्वसमहामन्त्री डा रामशरण महतलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । ‘हाम्रै साथीहरु पार्टी कार्यालयमा आएर बस्नुभएको छ । के समस्या आयो, किन बस्नुभयो ? तपाईंहरुले उहाँहरुको कुरा सुनेर कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यो अनशन टुंग्याउने कुराको प्रक्रियामा जानुस् ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै शर्माले भने ।
उनीहरुले आजै सानेपामा अनशन र धर्ना गरिरहेका नेता कार्यकतासँग छलफल गर्ने बुझिएको छ । देउवाको निर्देशनपछि सम्भवत आजै नै धर्ना र अनशन टुंग्याउने तयारी छ ।
क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गरिएको भन्दै काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा धनुषा र बाराका संस्थापन इत्तर पक्षका नेता कार्यकर्ताले धर्ना र अनशन जारी राखेका छन् । त्यसको काउन्टरमा बाराका संस्थापन पक्षले पनि धर्ना सुरु गरेको छ ।